Obbo Gedduu Andaargaachew
Gorsaa naga eegumsa biyya keessaa kan muummee ministeeraa Abiy Ahimed obbo Gedduu Andaargaachew, walitti bu’iinsa dhiiga dhangalaasisu kanneen jaarsummaan gidduu seenan galateeffaatanii gochi kun naannoo bira taree Itiyoopiyaa guutummaaf barnoota ta’a jedhan.
Yuniversitii Walloo, Yuniversitii Maqidalaa Ambaa fi godina bulchiinsa Walloo kibbaa waliin ta’uu dhaan martinuu nagaa fi nagana maraaf mata duree jedhuun, har’a magaalaa Dassee keessatti konfirensii qopheessan irratti, jaarsolii biyyaa, abboota amantii sababaalee lubbuu hedduu baduu fi qabeenyaan manca’uuuf walitti bu’iinsawwan geggeessaman mala aadaa kan jaarsolii biyyaan fashaluu isaatu ibsame.
Haala siyaasa biyyattii hordofee waggoottan sadarn darban namoonni dhuunfaa ijaa wal ba’uu qabee hanga caasaa mootummaa diiguu, bu’uuraalee misoomaa uummataa diiguu, daandii cufuu fi walitti bu’iinsaawwan sochii ugguran raawwatamaniiru.
Jaarsoliin biyyaa yaalii aadaan baratame gochuu dhaan miidhaa silaa dhaqqabuuf ture hanqisuun danda’amuu isaa bulchaan godina Walloo Kibbaa obbo Ijjiguu Melaakee ibsaniiru.
Walloo dhiyaaf Shamgaay, dhiyaaf immoo Abegaar jedhamuun jaarsliin waamaman, seera eegsisuu idileen walitti bu’iinsa hawaasaa jeequ furaniiru jedhamee jira.
Keessumaa aanaa Warra Iluu naanno Kaabeetti aanaan kun kan koo ti gaaffii jedhutti aansee muddama ture illee tasgabbeessuuf gumaachi isaan godhan guddaa ta’uun ibsamee jira.
Rakkoolee barattoota gidduutti uumames harmooliin furmaata itti godhaniru jedhameera.
Jirraattonni magaalaa kombolchaaf jaarslii dura teessummaan kan hoogganan namni obbo Seyid Yimaam namoota dhuunfaa qabee hanga waliti bu’iinsa amantii fakkaatu furuu dhaan beekamu.
Magaalaa isaanii bira darbanii aanaalee hollaa jiran dhaquun namoota araarsu, kanneen miidhaan irra ga’eef illee hirphi akka ba’u gochuu dhaan beekamu. Jaarsummaaf badhaasi kennamu nagaa fiduu dha jedhan obbo Seyid.